U diyaari gurigaaga dhibaato ama dagaal
Haddii dhibaatada ama dagaalku yimaado,
dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan is caawino.
Sidee u diyaarsantahay haddii hiitarka uu qaboobo feriijkana uu kululaado?
Haddii ay dhacdo duufaan daran, carqalad IT ama isku dhac hubaysan,
waxa aan u qaadanno si fudud ayaa laga yaabaa inay shaqeen wayso.
Sidaa darteed, way fiicantahay in la diyaar garoobo. Waxa ugu muhiimsan
waa in la helo cunto, biyo la cabbo, kuleyl iyo fursad aad ku hesho
macluumaad muhiim ah.
Ilaa intee diyaarsantahay?
Difaaca Guud – Dhamaan Sweden oo wada socota
SU'AALAHA HAD IYO JEER LA ISWEEYDIIYO - Ololaha ku saabsan u diyaarsanaanta guriga
Muxuu ku saabsanyahay??
Dawladdu waxay doonaysaa in qof kasta oo Iswiidhan ku nool uu si wanaagsan ugu diyaar garoobo dhibaatooyinka iyo dagaallada. Hay’adda Ilaalinta Rayidka iyo Qorshaynta Degdegga ah ee Iswidhan (MSB) ayaa sidaas awgeed waday ololayaal u diyaar-garowga xaaladaha degdegga ah tan iyo 2017. Hadafka waa in qof kasta oo awood u leh uu u diyaargaroobo inuu ku maareeyo toddobaad cunto, biyo, raadiyo iyo kuleyl. Tani waa waxa aan ugu yeerno u diyaarsanaanta guriga. Dadka diyaarka ah waxay u sahlayaan Sweden guud ahaan inay la tacaasho xaaladaha adag. Dhammaanteen waxaan ka mid nahay diyaargarowga Iswiidhan!
Maxaad rabtaa inaan sameeyo??
Way kuu fiicantahay hadii:
- Aad fahamto noocyada dhibaatooyinka ee dhici kara- sida ay u wax yeeleyn karaan adiga iyo qoyskaaga
- ay bixiyaan u diyaarsanaanta guriga muddo toddobaad ah si ay u awoodaan nolol maalmeedka caadiga ah xitaa waqtiyada qalalaasaha iyo dagaalka
- aad ka digdoonaanto wararka been abuurka ah iyo wararka xanta ah.
Waa maxay sababta tan hadda loo sameeyay?
Waxaa jira dhowr sababood. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa horseeday xaalad amni oo halis ah. Ma jirto khatar degdeg ah oo dagaal ka dhan ah Iswiidhan, laakiin siyaabo kale ayaa naloo saameeyaa. Tusaale ahaan, waxaa jirta halis carqalad ku ah soo dejinta badeecadaha iyo adeegyada labadaba. Fafaafida musiibada iyo isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale na saameeya hadda.
Marka la eego asalkan, laakiin sidoo kale guud ahaan marka ay timaado hanjabaadaha, halista, iyo baylahda, dadku waxay u baahan yihiin inay si wanaagsan ugu diyaar garoobaan. Sidaa darteed waxaan xayeysiineynaa dhowr jeer sanadkii si aan kuu xasuusino sida ay muhiim u tahay in loo diyaargaroobo dhibaatooyinka iyo dagaalka ugu xun. Tusaale ahaan, waxaan ku xayeysiineynaa u diyaarsanaanta guriga kanaalo kala duwan iyo luuqado kala duwan inta u dhaxaysa Juun 8 iyo Luulyo 24. Waa qayb ka mid ah hadafka MSB ee dawladda si loo kordhiyo adkeysiga dadka dhibaatooyinka iyo dagaallada
Maxaad hal shay ugu sheegteen xayaysiisyada (biyaha, raadiyaha, cuntada, tooshka)?
Waxaan bixinaa tusaaleyaal waxyaalaha wanaagsan in guriga lagu haysto. Ku bilow wax yar ka dibna kordhi diyaargarowgaaga. La qabso waxaad u baahan tahay inaad guriga ku haysato iyadoo ku saleysan baahidaada iyo qoyskaaga.
Maxay yihiin khataraha dhabta ah ee noqon kara??
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo halis ku ah bulshadeena. Qaar baa si lama filaan ah u yimaadda halka kuwa kalena laga yaabo inay si qarsoodi ah u yimaadaan. Isbeddelka cimiladu waxay keeni kartaa daadad, duufaano daran, iyo dab kaynta. Dhibaatooyinka ka jira waddamada kale waxay horseedi karaan yaraanta cunnooyinka qaarkood ee Iswidhan. Musalafnimada ama weerarada nidaamyada muhiimka ah ee IT-ga ayaa saameyn ku yeelan kara kaabayaasheena, sida bixinta korantada. Waxay kaloo horseedi kartaa bixinta kaararka iyo in uu internetku joojiyo shaqada.
Ma haysto fursad aan ku helo diyaargarow guri muddo toddobaad ah. Maxaan sameeyaa?
Samee waxaad awoodid! Wax yar ayaa macnaheedu noqon karaa wax kasta oo qalalaase ka jira. Xooga saar dhowr waxyaalood oo fudud:
- Diiradda saar dhawr waxyaabood oo fudud Hel raadiye raqiis ah oo ku shaqeeya batari. Markaa marwalba waad dhageysan kartaa wararka.
- Ku hayso guriga xoogaa cunto dheeri ah oo guriga kugu nagaaneysa waqti dheer oo aan u baahnayn in lagu keydiyo qabow. Dooro waxyaabaha adiga iyo qoyskaagu caadiyan aad cuntaan.
- Ku qor liiska telefoonnadaada ugu muhiimsan oo ku dheji si aad u ogaato halka aad ku haysato.
-Ku buuxi dhowr dhalo ama qasac biyo.
- Haddii aad isticmaasho daawo - hubi inaad hesho si aad u hesho toddobaad dheeraad ah
- Baro deriskaaga, waxay kuu fududaynaysaa wada shaqaynta. Isku soo wada aruuri waxyaalaha qaali yara noqon kara oo aadna wadaagi karto.
- Dalbo buug-yarahan "Haddii qalalaasaha ama dagaalku ka yimaado" MSB. Waxaa jira talooyin badan oo raqiis ah.
Wax ka baro qof kugu dhow oo la kulmay, tusaale ahaan, dagaal ama masiibo dabiici ah.
Miyaanay ahayn 72 saacadood tan khuseeysa?
72 saacadood ayaa loo adeegsaday macluumaadka masuuliyiinta Mareykanka iyo Kanada laakiin sidoo kale waxay ka mid yihiin degmooyin iyo ururo badan oo Sweden ah. Sanadkii 2020, Dowlada Sweden waxay qaadatay go'aan siyaasadeed difaac si ay ugu taliso in shaqsiyaadka gaarka ah loo diyaariyo hal todobaad. Tan iyo markaas, waxay ahayd toddobaad, laakiin 72 saacadood dabcan way ka fiican yihiin waxba.
Maxaa dhacaya usbuuc ka dib?
Suurtagal maaha in si sax ah loo sheego Laakiin muddo toddobaad ah, bulshadu waxay haysatay wakhti ay ku urursato agabkeeda si ay ugu suurtagasho inay xaaladda u maareyso sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Maxay tahay sababta aan xitaa ugu diyaar garoobayo?
Waxaad u baahan tahay inaad diyaariso maxaa yeelay u diyaarsanaanta Sweden waxay ku saleysan tahay qof walba - mas'uuliyiinta, ururada, shirkadaha iyo shakhsiyaadka gaarka ah ee qaadaya mas'uuliyadda iyo ku biirinta. Haddii aad qaadi karto mas'uuliyadda naftaada iyo qoyskaaga, waa inaad sameyso. Markaa culays kuma saaraysid bulshada, maxaa yeelay waxaa jira kuwa kale oo u baahan taageero. Haddii aad ubaahantahay taageero dheeri ah nolol maalmeedkaaga maanta, way kuu fiicantahay hadii kuwa kale ay diyaar garoobaan oo ay kaligood maamuli karaan, si aad u hesho kaalmadaada caadiga ah.
Bulshada miyaanu i daryeeli karin??
Iswiidhan, waxaan u barannay inta badan waxyaabaha ka shaqeeya, sida korontada, biyaha, gaadiidka, dukaamada, iyo lacag bixinta. Laakiin qalalaasaha ama dagaalka, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato in wax walba aysan ku filnaan doonin qof walba hal mar. Caawimada ayaa marka hore aadi doonta kuwa sida ugu fiican ugu baahan. Maamulka iyo ururadu waxay samayn doonaan wax kasta oo ay ku hagaajin karaan xaaladda sida ugu dhakhsaha badan. Waxaa jira qorshayaal lagu xallinayo dhacdooyin kala duwan, laakiin adiga laftaadu sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo, dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan is caawinno.
Senast granskad: 22 Bisha Lixaad 2022